20 ruux oo ku dhaawacantay qarax gaari loo adeegsaday oo Turkiga ka dhacay – STAR FM SOMALIA
20 ruux oo ku dhaawacantay qarax gaari loo adeegsaday oo Turkiga ka dhacay
Sida ay sheegayaan wararka laga helaayo dalka Turkiga gaari ayaa lagu qarxiyay xarun ciidamada Booliska ay ku leeyihiin oo ku taalo Gobolka Van ee dalkaasi.
Gaarigaasi lagu qarxiyay goobta Booliska ayaa waxaa ka dhashay Khasaare dhimasho iyo dhaawac, laakiin Warbaahinta dalka Turkiga ayaa sheegaysa 20 ruux inay ku dhaawacmeen qaraxa gaariga.
Dadka dhaawacyada ugu badan ay soo saareen ayaa ahaa dad shacab ah oo ka agdhawaa goobta Booliska qaraxaasi lagula eegtay.
Saraakiisha ciidamada Booliska dalka Turkiga ayaa sheegay inay wadaan baaritaanka ku aadan cid aka dambeysay qaraxaasi.
Ilaa hada ma jirto cid si gaar ah u sheegatay masuuliyada qaraxaasi inay ka dambeysay.
Dawladda Turkiga wali kama aysan hadlin qaraxaasi.
Mintidiin ka tirsan Kurdiyiinta ayaa aalaaba weerarro u gaysto saldhigyada ciidammada ammaanka ee dalka Turkiga.
Mareykanka oo sheegay inuu duqeyn ku dilay Hoggaamiyihii IS ee Afghanistan